Pearls Tourism Limited: Vita omaly teto amin'ny Golf Nosy Be Hell Ville ny fanatanterahana ny didy. | canalnews Madagascar
Pearls Tourism Limited: Vita omaly teto amin’ny Golf Nosy Be Hell Ville ny fanatanterahana ny didy.
sept 03, 2015 Mamitiana RASOLONIRINA A LA UNE, ACTUALITE, ECONOMIE, EDITORIAL 0
Tontosa an-tsakany sy an-davany omaly Alarobia faha-02 Septambra 2015 teto amin’ny Golf Nosy Be Hell Ville, ny fampiharana ny didy navoakan’ny fitsarana tany Antananarivo ny 26 Aogositra lasa teo. Araka ny « ordonnance de refere » laharana 6585 izay nohamafisin’ny filohan’ny fitsarana an-tampony tamin’ny 26 Aogositra lasa teo, fa miverina amin’izy ireo ny fitantanana ny orinasa Peals Tourism Limited miaraka amin’ny Maitso Madagasikara. Didy izay milaza fa mitsahatra amin’ny asany ny mpitantana teo aloha, toy izany ihany koa ny fanakatsakanana sy fanelingelenana ny fampiodinana izany.
Niroso tamin’ny fampiharana izany didy izany ary ny vadin-tany Atoa DINA nanomboka tamin’ny telo ora tolakandro omaly. Natao avokoa ny fandraisana an-tsoratra ny fananan’ny orinasa rehetra ary nifarana tamin’ny 9 ora sy sasany alina. Tsy maintsy misy ny dingana sy ny fenitra arahana rehefa amin’ny tranga toy itony raha ny fazavany. Tao anatin’ny filaminana no nanaovana izany teto an-toerana na dia tsy nisy mpitandro filaminana nanatrika aza izany. Efa nisy ihany ny fifampiresahana tamin’ireto farany mialoha ny hanatanterahana ilay didy saingy tsy nisy nety nanatrika izany.
Maintso Madagasikara: Olona zato isanandro no hahazo tombontsoa amin'ny fitantanana vaovao ny Golf eto Nosy Be. BAREA : vonona ny mpilalao sy ny mpitantana ny ekipam-pirenena malagasy handresy